पाँच पूर्वप्रमुख आयुक्तले भने : नेकपाको विवाद छिटो टुंगो लगाउ
काठमाडौं । पाँच जना पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता विवाद छिटो टुंगो लगाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । पाँच पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरुले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित कानुनी र स्थापित नजीरहरुको आधारमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका हुन् । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा अयोधीप्रसाद यादव र दोलखबहादुर गुरुङले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । ‘राजनीति दलको विवाद निरुपणमा ढिलाई गरेको भनि निर्वाचन आयोगका निर्णय क्षमता र स्वायत्तताका विषयमा उठाइएका प्रश्नहरुले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोग अनिर्णयको बन्दी रहँदा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा पार्नसक्ने गाम्भीर्यता तथा आयोगको आफ्नै शाखमा पर्न सक्ने असरलाई समेत विचार गरी प्रचलित कानून तथा स्थापित नजिरहरुको आधारमा समेत यस विषयमा उपयुक्त निर्णय यथाशीघ्र दिन आयोग समक्ष आग्रह गर्दछौँ ।’ विभाजित सत्तारुढ नेकपाका दुवै पक्षले आ–आफ्नो समूहले आधिकारिकता पाउने दाबी गरिरहेपनि निर्वाचन आयोगले हालसम्म कुनै पनि समूहलाई आधिकारितक दिने निर्णय गर्न सकेको छैन ।
Yug Darshan2महिना पहिले
प्रहरीको सुरक्षामा नेकपा मोरङको कार्यालय
विराटनगर / विभाजित सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मोरङको पार्टी कार्यालयमा प्रहरीले सुरक्षा प्रदान गर्न थालेको छ । विभिन्न स्थानमा पार्टी कार्यालय सम्बन्धी विवाद बढेर झडपका घटना हुन थालेपछि विराटनगर महानगरपालिका–११ पाञ्चालीमा रहेको कार्यालयमा प्रहरीबाट सुरक्षा प्रदान गर्न थालिएको हो । पार्टी कार्यालयको सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र पनि गरिसकेको छ... The post प्रहरीको सुरक्षामा नेकपा मोरङको कार्यालय appeared first on Purbeli News.
प्रचण्ड-माधव पक्षको पत्राचारपछि नेकपाको सबै बैंक खाता रोक्का हुने
१५ पुस, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को बैंक खाता रोक्का हुने भएको छ । आन्तरिक विवादपछि विभाजनको औपचारिक घोषणामात्रै हुन बाँकी रहेको नेकपाको विवाद समाधान नहुञ्जेलसम्म जुनजुन बैंकमा खाता रहेका छन्, ति सबै बैंक खाता रोक्का हुने भएको हो । निर्वाचन आयोगको निर्णय नआउञ्जेलसम्म दुबै पक्षले खाता सञ्चालन गर्न नपाउने गरी […]
नेकपाको बैंक खाता रोक्का गर्न प्रचण्ड–माधव समूहको पत्राचार
१५ पुस, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को बैंक खाता रोक्का गर्न आग्रह गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले बैंकहरुमा पत्राचार गरेका छन् । पार्टीभित्र विवाद रहेको र सम्पत्तिमा कसको हक लाग्ने भन्ने यकिन नभएको भन्दै उनीहरुले नेकपाको खाता रहेका बैंकहरुमा इमेलमार्फत पत्र पठाएका छन् । पुस १२ गतेको मिति […]
पूर्व कानुनमन्त्रीले भने - प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाऔँ
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद शेरबहादुर तामाङले शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नाको कुनै विकल्प नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा पूर्वकानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री तामाङले खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले विकास थिलोथिलो भएको र भ्रष्टाचार मौलाएको जनाउँदै अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए …